Eredlọ ọrụ na-agba gburugburu na-agba gburugburu - Ndị na-emepụta ngwaahịa, ndị na-eweta ngwaahịa
QYBZ Taịlị Mpịakọta III
Ihe nkedo a na-agba agba dị iche iche. Ma mgbanaka nke ime na mpụga nke mgbatị ahụ nwere okporo ụzọ awara awara. Nke a na ụdị amị na-ekewa n'ime otu ahiri, abụọ n'usoro na anọ n'ahịrị tapered ala biarin dị ka ọnụ ọgụgụ nke e nyere ahịrị arụnyere. Single n'usoro tapered ala biarin nwere ike ibu radial ibu na otu direction axial ibu. Mgbe ebu na-ebu ibu radial, ọ ga-ewepụta ike akụrụngwa axial, yabụ ihe ọzọ na - ebu ya nwere ike iburu ike axial na ntụgharị ihu dị mkpa iji dozie ya.
QYBZ akpọrọ Roller Bearings I
Tapered ala agba ụdị nke a na-agba mejupụtara n'ime mgbanaka, elu mgbanaka na tapered Rolling mmewere. N'ihi na geometry nke ya imewe, tapered ala biarin nwere ike idi jikọtara ibu (axial na radial). Na mgbakwunye, imewe ahụ na-enye ohere ka ndị rollers na-aga n'ihu na-agagharị ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-adaba na okporo ụzọ nke mgbanaka na nke ime.